Muuri News Network » ARAG SAWIRADA: Marwo Binti Ibraahim Cali oo Qabtay Arin La gaari waayey..
ARAG SAWIRADA: Marwo Binti Ibraahim Cali oo Qabtay Arin La gaari waayey..
May 17, 2016 - Comments off
Wasaaradda haweenka koonfur galbeed ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 17/05/2016 soo qabanqaabisay tababar ku saabsan doorka haweenka ay ju leeyihiin hogaanka iyo xasiloonida dalka.
Tabarkaas ayaa waxaa ka soo qeybgalay 54 haween ah oo kakala socday 3gobol uu ka koobanyahay maamulgoboleedka koonfurgalbeed soomaaliya iyo weliba 18 ka degmo uu kakoobanyahay. Tababarkaas ayaa waxaa ka soo qeybgalay wasiiro, xildhibaano, gudoomiyaha gobolka.
Wasiirada kasoo qeybgalay waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga, wasiirka dalxiiska iyo bii.ada iyo weliba wasiiradda haweenka koonfurgalbeed soomaaliya marwo binti ibraahim.
Qudbado kala duwan oo ay meesha kajeediyeen madaxdii kala duwanaaa ee kasoo qeybgashay furitaanka tababarkaas ayaa waxaa ugu danbeyntii qudbad kajeedisay wasiiradda wasaaradda haweenka marwo binti ibraahim.
Wasiiradda ayaa ku guubaabisay haweenkii kasoo qeybgalay tababarka iyo ay kaqeybqaataan xasillinta iyo hogaaminta bulshada koonfurgalbeed soomaaliya. Tababrkan ayaa socondoona muddo 4 maalmood ah waxaana lafilayaa in uu noqdo mid mira-dhal fcn yeesha.
Wasaaradda haweenka koonfur galbeed ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 17/05/2016 soo qabanqaabisay tababar ku saabsan doorka haweenka ay ku leeyihiin hogaanka iyo xasiloonida dalka.
Tababrkaas ayaa waxaa ka soo qeybgalay 54 haween ah oo kakala socday 3da gobol uu ka koobanyahay maamulgoboleedka koonfurgalbeed soomaaliya iyo weliba 18 ka degmo.
Tababarkaas ayaa waxaa ka soo qeybgalay wasiiro, xildhibaano, iyo gudoomiyaha gobolka. Wasiirada kasoo qeybgalay waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga, wasiirka dalxiiska iyo bii.ada iyo weliba wasiiradda haweenka koonfurgalbeed soomaaliya marwo binti ibraahim.
Qudbado kala duwan oo ay meesha kajeediyeen madaxdii kala duwanaaa ee kasoo qeybgalay furitaanka tababarkaas ayaa waxaa ugu danbeyntii qudbad kajeedisay wasiiradda wasaaradda haweenka marwo binti ibraahim.
Wasiiradda ayaa ku guubaabisay haweenkii kasoo qeybgalay tababarka in ay kaqeybqaataan xasillinta iyo hogaaminta bulshada koonfurgalbeed soomaaliya. Tababrkan ayaa socondoona muddo 4 maalmood ah waxaana lafilayaa in uu noqdo mid mira-dhal fcn yeesha.
ISHA WARARKA OO DHAN